Chate Sat | Reliable freelancers for your business ချိတ်ဆက်မှာ... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
ချိတ်ဆက်မှာ ဘယ်လို အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေ ရှာလို့ရသလဲ?
ယခုလို နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အလွတ်တန်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေလည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးပွားလာနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခေတ်မှီ နည်းပညာသစ်များ​တွေကလဲ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာမှာ လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်လည်း များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလိုတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်နဲ့အတူ “ချိတ်ဆက်” ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ​​ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ​ယခုဆိုရင် ပြည်တွင်း ပြည်ပက လုပ်ငန်းရှင်​တွေအတွက် အလုပ်တွေ အဆင်ပြေချော​မွေ့စွာ ပြီးမြောက်အောင် ကျွမ်းကျင်အလွတ်တန်းပညာရှင်​တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သလို အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေ အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကတော့ စာရေးခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဘာသာပြန်ခြင်း စသည့်အလုပ်တွေအတွက်သာ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ နယ်ပယ်အသီးသီးက အတွေ့ကြုံရှိတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်များစွာဟာ သင်နှင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - လျှပ်စစ်နှင့် အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းဆွဲရာမှာ ထူးချွန်တဲ့အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေ ရှိသလို၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်​တွေနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်ပေးတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်​တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလှအပဆိုင်​ရာ အလွတ်​တမ်​းပညာရှင်​​တွေ နဲ့ ပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အလွတ်တန်း သင်တန်းနည်းပြတွေလည်း ရှိကြပါသေးတယ်။
“ချိတ်ဆက်” ပလက်ဖောင်းရဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ ဒီဇိုင်းနာတွေ၊ ဘာသာပြန်သူတွေနှင့် IT သမားတွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ "ဘယ်လို အလွတ်တန်းပညာရှင်ပဲလိုလို" ချိတ်ဆက်ပလက်ဖောင်းမှာ ပရောဂျက်တင်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပရောဂျက်တင်​်ပြီးသည်အထိ​ တိုင်အောင် “ချိတ်ဆက်”က အခမဲ့၀န်ဆောင်မှုပေးထားတာကြောင့် မိတ်ဆွေအတွက် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိတဲ့အပြင် ပရောဂျက်တင်ထားပြီးရင်လည်း အဆင်ပြေဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် “ချိတ်ဆက်” ဘက်မှ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေ ရှာပေးအုံးမှာမို့ ဘာလိုသေးလဲ? သင့်ဘက်ကသာ ပရောဂျက်တင်လိုက်ပါ သင့်လုပ်ငန်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေ အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အလွတ်တန်း လုပ်လို့ရသမျှ အလုပ်တွေ အားလုံးအတွက် ပညာရှင်တွေ ရှိပြီးသားပါ။ chatesat.com ကိုသွားပြီး “Get Started” ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးတစ်ချက်ပဲ နှိပ်ဖို့လိုတာပါ။
အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတစ်ယောက် ထပ်မံငှားရမ်းစရာမလိုပဲ အလုပ်တွေပြီးမြောက်ဖို့၊
၀န်ထမ်းတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့ချနိုင်စေဖို့
စတဲ့ အကျိုး​ကျေးဇူး​တွေအတွက်​ “ချိတ်ဆက်”ရဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းဖို့ သင်ဟာ နေရာမှန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီသော အလွတ်​တန်​း ပညာရှင်​များကို "ချိတ်​ဆက်​” ပလက်ဖောင်းမှာလာရောက် ရှာဖွေငှားရမ်းခြင်းဖြင့် မိမိလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များကို လျှင်မြန်စွာပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါ​ကြောင်​း သတင်​း​ကောင်​းပါးလိုက်​ ပါရ​စေခင်​ဗျာ!